Estradiol Benzoate Injection (အီစထိုဂျင်) - တရုတ် Ningbo ဒုတိယအဟော်မုန်း
Estradiol Benzoate Injection (အီစထိုဂျင်)
Estradiol Benzoate Injection (အီစထိုဂျင်) [ဖျေါပွခကျြ] ဒီထုတ်ကုန်ဟာအဝါရောင်ဖျော့ပွင့်လင်းဆီပြန်အရည်ဖြစ်ပါတယ်။ [ရာထူးအမည်နှင့်အသုံးပြုမှု] ဒါဟာဒုတိယလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရိပ်လက္ခဏာနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုတိရစ္ဆာန်များအဘို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်ရန် uteruses နှင့် oviducts များအတွက်ကျုံ့၏ function ကိုမြှင့်တင်ရန်, oxytocin မှ uteruses ၏ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်နှင့်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ orifices ၏အပန်းဖြေမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ mammary ပြွန်စနစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဓိကချို့ယွင်း၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏနှင့်အတူ ...
Estradiol Benzoate Injection (E ကို strogen )
ဒါဟာဒုတိယလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရိပ်လက္ခဏာနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုတိရစ္ဆာန်များအဘို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်ရန် uteruses နှင့် oviducts များအတွက်ကျုံ့၏ function ကိုမြှင့်တင်ရန်, oxytocin မှ uteruses ၏ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်နှင့်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ orifices ၏အပန်းဖြေမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ mammary ပြွန်စနစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဓိကချို့ယွင်း၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏနှင့်အတူ, ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားရှိသည်ဖို့အမျိုးသမီးတိရိစ္ဆာန်များလှုံ့ဆျောနိုငျသညျ။ ဒီထုတ်ကုန်အမျိုးသမီးတိရစ္ဆာန်များအဘို့ပေးပို့ပြီးနောက်ထိန်းသိမ်းထားသန္ဓေသားအမြှေးပါး, endometritis နှင့်သားအိမ် pyometra အတွက်ကျယ်ပြန့်အသုံးချဖြစ်ပါတယ်။ ပူးပေါင်း oxytocin နှင့်အတူအသုံးပြုသောအခါတွင်လည်းအားနည်းသားအိမ်ကြွက်သားတွေအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်မှာ, နွားတွေအဘို့နို့၏ induction အတွက် mammary ဂလင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လျှောက်ထားသည်။
estrus ၏ထောက်လှမ်းလွယ်ကူချောမွေ့နှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင် Mare Serum gonadotropin estrus မြှင့်တင်ရန်လျှောက်ထားသောအခါ estrous ဆိုင်းဘုတ်များသိသာစေရန်အလို့ငှာ, estradiol ၏ 6-8mg ၏အသားထိုးဆေးအတွက်: သမဝါယမ estrus မြှင့်တင်နေစဉ်အတွင်း estrous ဆိုင်းဘုတ်များသိသာအောင်ကိုယ်ဝန်ဆောင် Mare Serum gonadotropin နှင့်အတူအသုံးပြုသော 1. benzoate ကိုယ်ဝန်ဆောင် Mare Serum gonadotropin သုံးပြီးပြီးနောက်ဒုတိယနေ့၌အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါသည်။
2. oxytocin မှသားအိမ်ကြွက်သားတွေ၏ sensitivity ကိုတိုးတက်စေူခင်း: ကလေးမွေးဖွား၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အီစရိုဂျင်၏လျှောက်လွှာသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ orifices ၏အဖွင့်မြှင့်တင်ရန်, ဒါပေမယ့် oxytocin မှသားအိမ်ကြွက်သားတွေ၏ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်မသာ။ oxytocin ၏ဆေးထိုးမီ, estradiol benzoate ထိုးခံရကြလိမ့်မည်နှင့်အောက်ပါအတိုင်းဆေးထိုးဖြစ်ပါသည်: 3-10 တိရစ္ဆာန်များအဘို့ 5-20mg ဝက်များအတွက်မီလီဂရမ်, မြင်း 10-20mg, သိုးတို့အဘို့ 1-3 မီလီဂရမ်များအတွက် 0.5-2.0mg ခွေးနှင့်ကြောင်များအတွက် 0.2-0.5mg ။
သားအိမ်ရောဂါများ 3. ကုသမှု: က, endometritis ဆက်ဆံပါသားအိမ် inertia (သားအိမ်၏ subinvolution) နှင့်ပူးပေါင်း oxytocin နှင့်အတူအသုံးပြုသောအခါ, ဖြန့်ဝေပြီးနောက်သန္ဓေသားအမြှေးပါးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ Estradiol, နွားနှင့်မြင်း 75-100IU ((အလယ်တန်းအရွယ်တိရစ္ဆာန်များအဘို့ 10-20mg, ကြီးမားတဲ့တိရစ္ဆာန်များအဘို့ 20-30mg နှင့်အသေးစားတိရစ္ဆာန်များအဘို့ 5-10mg) ပထမဦးဆုံးထိုးသွင်း, ပြီးတော့ oxytocin ကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုရကြလိမ့်မည်ဖြစ်ရလိမ့်မည် 30- ခွေးဝက်သိုး, 10-25IU များအတွက် 50IU နှင့်ကြောင်များအတွက် 5-10IU); အသားထိုးဆေးသို့မဟုတ် Intrauterine ဆေးထိုးတစ်ကြိမ်7ရက်, လျှောက်ထားရမည်။
4. estrus မြှင့်တင်ရေး: estradiol benzoate မြင့်မားဆေးများလက်တွေ့ anoestrus တိရစ္ဆာန်များအဘို့ estrus မြှင့်တင်ရန်သုံးနိုင်တယ်; သို့သော်ဤအချိန်များ၏ estrus များသောအားဖြင့်ဒီနည်းနဲ့မျိုးဥထွက်မှ follicles ၏ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုမြင့်တက်ပေးပေမယ့် estrus သံသရာပုံမှန်မဟုတ်နိုင်ပါ။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဆေးထိုးဖြစ်ပါသည်: တိရစ္ဆာန်များနှင့်မြင်း 10-20mg; ဝက်အဘို့အ 5-10mg; သိုးတို့အဘို့ 3-5mg ။
1. အမြင့်ဆေးများ, ရေရှည်သို့မဟုတ်ဤထုတ်ကုန်၏မသင့်လျော်အသုံးပြုမှုကိုသားအိမ် cyst, ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ, သားအိမ်ကျုံ့နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုတိရစ္ဆာန်များအဘို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသံသရာဖမ်းဆီးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
2. အစားအသောက်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် Contraindicated ။
နွား, သိုး, ဝက် (ယာယီ) ကို 28 ရက်; နို့အဘို့အ7ရက် (ယာယီ)
Shaded နှင့်လုံ; အသက် 30 ℃၏အပူချိန်အောက်မှာသိမ်းဆည်းထား။
ယခင်: Dexamethasone ဆိုဒီယမ်ဖော့စဖိတ် Injection
နောက်တစ်ခု: Injection ကိုများအတွက် gonadotropin (GnRH)
Estradiol Benzoate Injection ကိုတိရိစ္ဆာန်